खेलकुद Archives | Karnali Online
३ असार २०७५, आईतवार २०:१६ June 17, 2018 Shyam BC
एजेन्सी । रसियामा जारी विश्वकप फुटबलअन्तर्गत समूह ‘ई’ को खेलमा स्वीट्जरल्याण्डले ब्राजिलसँग १–१ गोलको बराबरी खेलेको छ । स्वीट्जरल्याण्डले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै ब्राजिललाई रोक्न सफल भएको हो । निकै कमजोर
३१ जेष्ठ २०७५, बिहीबार ०७:०४ June 14, 2018 Shyam BC
एजेन्सी । क्लब फुटबलमा राम्रो प्रदर्शन गरिरहेका केही खेलाडी विश्वकप फुटबलमा हुने छैनन् । कतिपयले आफ्नो देश विश्वकपमा छनोट नहुँदा खेल्न नपाएका हुन भने कतिपय घाइते भएका कारण । त्यस्तै,
३१ जेष्ठ २०७५, बिहीबार ०२:१२ June 14, 2018 Shyam BC
एजेन्सी । विश्वकपको उद्घाटन खेलमा आयोजक रसिया र साउदी अरेबियाबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । मस्कोको लुज्निकी स्टेडियममा हुने खेल नेपाली समय अनुसार साँझ पौने ९ बजे सुरु हुनेछ । फिफा वरियता अनुसार विश्वकपमा
विश्वकप हेर्न ट्र्याक्टरमा रुसतर्फ
२६ जेष्ठ २०७५, शनिबार १०:५६ June 9, 2018 Shyam BC
बर्लिन । ट्र्याक्टर चढेर तपाईं कहाँ सम्म पुग्न सक्नुहुन्छ ? एक जर्मन फुटबल समर्थक भने ट्र्याक्टर चढेर अबको पाँच दिनपछि सुरु हुने २१औं संस्करणको विश्वकप हेर्न रुसतर्फ लागेका छन् ।
२३ जेष्ठ २०७५, बुधबार १०:३५ June 6, 2018 Shyam BC
एजेन्सी । विश्व फुटबलको महाकुम्भ फिफा विश्वकप आउन अब एक साता मात्रै बाँकी छ । विश्वको सबैभन्दा लोकप्रिय खेल र त्यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रतियोगिता रुसमा आयोजना हुँदैछ । विश्वकपका सबै
प्यालेष्टिनी बालबालिकाको पत्र: हाम्रा पूर्वजको चिहानमा खेल्छन् त मेस्सी ?
२१ जेष्ठ २०७५, सोमबार १०:५२ June 4, 2018 Shyam BC
एजेन्सी । जुन ९ मा अर्जेन्टिनी फुटबल टिमले इजरायलसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेलदैछ । यो खेल अर्जेन्टिनाका लागि विश्वकपको तयारी खेल हो । यो खेललाई अर्जेन्टिनी नागरिकले ‘लक्की गेम’ का रुपमा हेरेका
१६ जेष्ठ २०७५, बुधबार ०३:२८ May 30, 2018 Shyam BC
एजेन्सी । विश्वकप अगाडिको अन्तराष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा अर्जेन्टिना विजयी भएको छ । बुधबार बिहान भएको खेलमा अर्जेन्टिनाले हैटीलाई चार शून्य गोलले पराजित गर्‍यो। अर्जेन्टिनामा भएको खेलमा घरेलु टिमको जितमा मेसीले
८ जेष्ठ २०७५, मंगलवार ०५:२० May 22, 2018 Shyam BC
काठमाडौँ । इन्डियन प्रिमियर लिग आईपीएल क्रिकेटमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने आज स्वदेश फर्कदैछन् । उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेर आईपीएल क्रिकेटको बलिङ इकोनोमीमा पाँचौ नम्बरमा पुगेका १७ वर्षका
३१ बैशाख २०७५, सोमबार ०२:२४ May 14, 2018 Shyam BC
एजेन्सी । स्पेनिस लालिगा फुटबलको सिंगो सिजन अपराजित रहने बार्सिलोनाको सपना चकनाचुर भएको छ । सोमबार बिहान भएको खेलमा लेभाण्टेसँग ५–४ ले पराजित भएसँगै ला लिगाको सिजनभरि अपराजित रहने बार्सिलोनाको
१ सेट कम्युटर विधालयलाई हस्तान्तरण ।। ३१ बैशाख २०७५, सोमबार ०२:२४
कर्णाली करिडोरस् छारे सलिसल्ला सडक निर्माण कार्य तिब्र ।। ३१ बैशाख २०७५, सोमबार ०२:२४
एसइइ परीक्षाको नतिजा सुधार्न अभिभावक भेला ३१ बैशाख २०७५, सोमबार ०२:२४